» Guddoomiyaha barlamanka Jabuuti oo Muqdisho booqasho ku yimid Boga Hore SOOMAALIYA
Xildhibaan Xoosh oo si adag kaga hadlay Arinta J/land: “Jubaland sharci ma aha”
Wax walba oo aad ubaahan tahay inaad ka ogaato Sababaha dib loogu dhigay doorashada Puntland
Guddoomiyaha barlamanka Jabuuti oo Muqdisho booqasho ku yimid
December 12, 2012 - Written by Muqdisho - Edited byMuqdisho ShareGuddomiyaha barlamanka dalka Jabuuti ayaa maanta soo gaaray Magaalada Muqdisho iyadoo ay garoonka Aadan Cade ay ku soo dhaweeyeen Guddoomiyaha barlamanka Soomaaliya iyo kuxigeenadiisa.
Idiris Aar Naaquud Cali Guddoomiyaha barlamanka Jabuuti ayaa markii uu ka soo dagay Garoonka Aadan Cade ee Magaalada Muqdisho waxa uu la hadlay Saxaafada waxana uu sheegay in uu ku farasanyahay imaatinkiisa Magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha barlamanka Jabuuti ayaa tilmaamay in Jabuuti ay sii hormarin doonto xiriirka ay la wadaagto Soomaaliya islamarkaana uu doonayo in uu arrimo badan oo barlamanka labada dhinac quseeyo uu kala hadlao dhigiisa Soomaaliya Jawaari.
Labada Guddoomiye iyo xubno weliyay ayaa u anbaxabay dhanka Madaxtooyada Villa Soomaaliya halkaasi oo lagu wado in Guddoomiyaha Barlamanka Jabuuti uu kula kulmo Madaxda dowladda Soomaaliya.
Booqashada uu guddoomiyaha barlamanka Jabuuti Idiris Aar Naaquud Cali uu ku yimid Muqdisho ayaa qeyb ka ah booqashooyin ay mas’uuliyiinta labadal isweydaarsanayeen taasi oo lagu xoojinayo xiriirka labada dal.
2 Responses to Guddoomiyaha barlamanka Jabuuti oo Muqdisho booqasho ku yimid
caaqilka somaliyeed says:	December 12, 2012 at 13:06	waanu soo dhaweeneynaa walaaleheena jamhuuriyada jibuuti gacma furan kusoo dhawaada wadankiina 2baad
Reply	Dhakaajo says:	December 12, 2012 at 19:42	Aad baan u so dhawenaynaynaa gadomiyaha barlmanka ee dolada enu walalaha nahny